गुगल अनुकूलन खोजको साथ वर्डप्रेस खोज बदल्नुहोस् Martech Zone
गुगल कस्टम खोजको साथ WordPress खोजी बदल्नुहोस्
सोमबार, सेप्टेम्बर 15, 2008 बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
सामना गरौ, WordPress खोज ढिलो र धेरै असुरक्षित छ। धन्यबाद, गुगल दुबै प्रज्वलित छिटो र सही हो। थप रूपमा, गुगलको गुगल कस्टम खोजी तपाईंको आफ्नै ब्लगमा (वा वेब साइट) इम्बेड गर्न विकसित भएको छ।
Permalinks र गुगल कस्टम खोज
मेरो जस्तो परमलिक्स सहितको साइटको लागि, मैले एउटा अतिरिक्त संशोधन गर्नुपर्‍यो, यद्यपि। मैले फारम ट्यागमा कार्य गर्नुपर्‍यो डोमेनको साथ पूरै यूआरएल आपूर्ति गर्नु भन्दा।
गुगल कस्टम खोजको अर्को राम्रो सुविधा छ ... यसले चित्रित चित्र तान्नेछ यदि तपाईंको साइटले उनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ र तपाईंसँग अनुकूलन हेडरहरू माइक्रोडाटा प्रयोग गर्दै छन् भने schema.org। म यो प्रयोग गर्छु Yoast WordPress SEO प्लगइन यसको ख्याल राख्न - र मेरो साइट प्रत्येक पोष्टको लागि विशेष छविहरूको साथ अपडेट गरिएको छ।
खोजी नतिजा पृष्ठ टेम्प्लेट बनाउनुहोस्
तपाईंको थिम ह्याक गर्न वा तपाईंको पृष्ठ सामग्रीमा इम्बेडेड जाभास्क्रिप्टको साथ गडबडीको सट्टा, म गुगल कस्टम खोज परिणाम पृष्ठको लागि टेम्प्लेट निर्माण गर्न पनि सिफारिस गर्दछु। यो गर्नका लागि, केवल एक पृष्ठ बनाउनुहोस् जुन तपाईंको एकल पृष्ठ थिम पृष्ठ जस्तो संरचना गरिएको हो। तपाईलाई आवाश्यक नभएको सबै भागहरू मेट्नुहोस् र गुगल कोड घुसाउनुहोस्। तपाईको टेम्प्लेटमा पृष्ठ थप्नुहोस् र googlecse.php को रूपमा यस भित्र निम्न कोडको साथ कल गर्नुहोस्:
खोज परिणाम: [तपाईंको गुगल कस्टम खोज परिणाम कोड यहाँ घुसाउनुहोस्]
अब, जब तपाइँ तपाइँको नतीजाहरूको लागि नयाँ पृष्ठ थप्नुहुन्छ, यसलाई टेम्पलेटको रूपमा चयन गर्नुहोस्:
म कुनै पनि ब्लगमा यो गर्न हिचकिचाउँदिन - गतिमा ब्लेजि। सुधारको लागि मात्र होइन तर सान्दर्भिक परिणामहरूका लागि पनि। तपाईं पक्षमा एक जोडी पैसा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईंको लागि हेर्नुहोस् र स्पिनको लागि मेरो नयाँ खोजी फाराम दिनुहोस्! तपाईं निराश हुनेछैन!
एउटा नोट: यदि तपाइँ थिम चलाउदै हुनुहुन्छ भने बीस एलेवन विषयवस्तु, तपाईले खोजी फिल्ड CSS अपडेट गर्न आवश्यक छ! प्रत्येक क्वेरी फिल्ड शैलीहरूमा महत्वपूर्ण छ ताकि तपाईले हेराई र अनुभव कायम राख्नुहुनेछ! तपाईंले आफ्नो शैली पानामा इफ्रेम सीएसएस चौडाइलाई हार्ड-कोड गर्न आवश्यक पर्दछ (जावास्क्रिप्ट भित्र चौडाई वैकल्पिक रूपमा सेट गर्नाले कुनै प्रभाव पार्दैन जस्तो देखिन्छ)।
टैग: गुगल सीएसईगुगल सीएसई WordPressGoogle +विषयबीस एघारबीस वर्षWordPress cseWordPress google cse
Strate रणनीतिहरू वेबमा ध्यान दिनुहोस्
सेप्टेम्बर 16, 2008 मा 12: 59 AM
मैले मेरो ब्लगमा लामो समयदेखि गुगल कस्टम खोज गरेको छु। यद्यपि, म दुवै विकल्प खुला राख्छु।